Actorylọ ọrụ na - emepụta ihe, ndị na - eweta - China Ndị na - emepụta ngwaahịa
Ngwongwo ihe eji eji osisi eme: osisi di iche iche, ezigbo ihe eji eme ihe, ihe eji egwuri egwu, uzo osisi, enyo, akwa uzo, ibo uzo eji eme ihe, iko ebe, ibo uzo, ibo eji ukwu, isi ihe na ihe ndi ozo. Industrylọ ọrụ Mgbasa Ozi: Nchọpụta mgbasa ozi, ime ihe ọsụsọ, ihe osise na mkpụrụ osisi, nyocha okwu kristal, ịkpụzi ihe na ndị ọzọ na-eme ihe ngosi.
Atọ spindle osisi cnc rawụta igwe
Ejiri igwe cnc nlereanya a mee ihe bụ ịkpụ osisi na ịkwa osisi. Ọ bụghị naanị imepụta ngwaahịa dị iche iche 2d ewepụghị nwere ike imepụtakwa 3d ngwaahịa. N'ihi na igwe eji akụ osisi anyị nwere ike ekewa 3 axis na igwe axis 4, ọ nwere ike gboo mkpa mmepụta dị iche iche nke ndị ahịa. Ihe owuwu ruru atọ dị ogologo, Gantry bụ ihe eji arụ ọrụ. Yabụ igwe kwụsiri ike mgbe ọ na-arụ ọrụ. Tebụl nwere ike ibute ọtụtụ ibu, Nke a na-eme ka ọ bụghị naanị nkwụsi ike kama ọ na-akwụkwa ọtọ.
Usoro nke iwepu ngwa ngwa, njikarịcha, imewe, belata, igwu mmiri, igwe ihe, mkpọchi akpaka na usoro ndị ọzọ na-arụzi ọrụ n'otu oge. Igwe eji eme ihe eji eme ihe eji eji uzo ano, ihe ndi eji eme ihe eji eme ihe eji abanye.
Emere igwe eji emeghe na igwe eji emeghari onwe ya ihe anaghi adi nma maka ndi ahia. A na-ejikwa isi anọ na-achịkwa isi anọ ma nwee ike gbanwee ya, nke nwere ike ịmechaa ọtụtụ atụmatụ nke onye ahịa zụrụ (nhazi usoro ọrụ chọrọ mgbanwe ngwá ọrụ n'ime ngwaọrụ 2-4), nke na-echekwa mgbanwe mma ntuziaka dị n'etiti na bụ dabara adaba na ngwaahịa ndị nwere ọtụtụ maka imepụta ọnụ ụzọ osisi, arịa ụlọ na akwara egwu.
Igwe a na-ete bọọlụ Lamino bụ igwe pụrụ iche e ji eme ihe iji gbue ma na-asụkwa ya. Ọ nwere ike tufuo ụdị ịkpụzi usoro ọdịnala ma dabere na ịrụ ọrụ ntuziaka. Ọ nwere ike nweta nrụpụta nwere ọgụgụ isi site na njikọ nke imewe, ịchụpụ na sọftụwia ụdị.
Tingchapu, ịkụ ọkpọ, ịkụ ọkpọ, ịkọ ihe (ịme ihe dị mfe). Enwere ike iji usoro anọ a maka igbatu ma ọ bụ kabinet n'ọnụ ụzọ. Site na iji usoro mgbanwe ngwaọrụ eji arụ ọrụ ngwa ngwa dị elu, ihe omume a na-emezu ihe achọrọ nhazi na-enweghị ntinye aka. Spindles dị iche iche na-arụ ọrụ n'otu oge, na-emeziwanye nhazi nhazi.
Ngwongwo oche, uko, ube akwa, akwa ulo, ihe ndi ozo.aka ulo uka tinye onwe gi n ’onodu onye ozo itinye onwe ya n’ onodu onye ozo, ambry, oche, oche udiri, oche ulo, igbe osisi, ihe eji akpu osisi na akụrụngwa, atọ. nhazi sistemụ nha, akụkụ ọnụ ụzọ, ụlọ ọrụ aka, ọnụ ụzọ osisi, ibo ụzọ wenqi, ihuenyo mpịachi, nhazi usoro ịkpụzi usoro windo.
3.6 m ịgwọ ọrịa ịka nká dị ukwuu na akwa ịgbado ọkụ nchara (igwe ihe igwe ọ bụla na akụkụ ihe ndina ọ bụla erughi nde abụọ nke CNC egwe ọka dị elu, na -emekwa oghere oghere dị n'ihe ndina site na data ziri ezi. ebe a na-ahazi ya, ya na igwe ọrụ dị elu). Igwe ahụ na-ejikọ igwe kwụ ọtọ na igwe kwụ ọtọ HQD abụọ 6KW dị elu na-arụ ọrụ mgbanwe Changsheng, na ntanetị mbụ HQD supercharged pụrụ iche nke 5 + 4 CNC na-egwu mmiri (mgba ọkụ na-agba ọkụ, mkpọpu mmiri adịghị alaghachi).
CNC atc usoro ihe eji arụ ọrụ
A na-ejikarị na ịkpụ akwa dị arọ, igwe ihe, igwe ihe, enyemaka na nhazi ndị ọzọ, arịa ụlọ, osisi, ụzọ osisi siri ike, ọnụ ụzọ agba, ụzọ mbata, igbe, ihe Buddha, achara na osisi, akpa kọfị, plastik, ihe ndozi, bọọdụ ebili mmiri. , Ime, enyo enyo, ihe osise foto, ịchọ mma, ngwaahịa osisi, ihe mkpuchi 3D, mkpọpu ala, ibelata enyemaka, wdg.